Warshadda Alaabta - Soo-saareyaasha Alaabada Shiinaha, Alaab-qeybiyeyaal
Daaqadda sabaynaysa waxay aqbashaa "nidaamka beddelka wareegga wareegga mobilada dhidibka badan". Qaabkeeda furitaanka dhinac u gaarka ah ee gaarka u rogaya waxay jabineysaa seddexda qaab ee furitaanka jira ee riixista, furitaanka jiifka iyo u rogida adduunka. Waxay ka dhigeysaa adeegsi cilmiyeysan oo wax ku ool ah faa'iidooyinka daaqadda sibidhka ah si loo badbaadiyo booska, daaqadda furitaanka dhinaca ayaa la xidhayaa iyadoo la riixayo, nooca rogayna wuxuu beddelaa hawo. Markii uu furmo daaqada sabaynaysa, waxaad u baahan tahay oo keliya inaad si tartiib ah u leexiso taangiga si aad u furto ...
Faa'iidooyinka ayaa ah aag weyn oo furitaan ah, hawo wanaagsan, quwad wanaagsan, daboolida dhawaaqa, ilaalinta kuleylka iyo awood la'aan. Nadiifinta daaqaddu waxay ku habboon tahay furitaanka gudaha; daaqadda furan boos kama bannaana marka furitaanka furan yahay. Faa’iido darrada jirta ayaa ah in daaqadda ay yar tahay oo muuqaalka uusan furneyn. Furitaanka daaqadda banaanka waa inay fariisataa meel ka baxsan derbiga, taas oo ay fududahay in waxyeello soo gaarto markay dabayshu dhacdo; halka daaqadda gudihiis ay tahay inay qabsato qayb ka mid ah booska ku jira, mana ku habboon tahay in la isticmaalo daaqadda shaashadda. Markaad fureyso daaqadda, kuma haboona in la isticmaalo daaqadda shaashadda iyo daahyada, sida tayada oo aan la xirin, sidoo kale roobka ayay dhex mari kartaa.